September 2015 - Myanmar News Plus
တနှစ်က မန္တလေးသင်္ကြန်ကို သွားလည်ဖြစ်တယ်။သင်္ကြန်တွင်း လူအစည်ကားဆုံးဖြစ်တဲ့ကျုံးနဲ့ အနီးဆုံးဟော်တယ်တစ်ခုမှာ တည်းခိုဖို့သွားတော့ အခန်းတိုင်း လူပြည့်နေတယ်တဲ့။တော်တော်စိတ်ညစ်သွားတယ်။ကောင်တာစာရေးမက ဆက်ပြောလာတယ်…“အခန်းလွတ်တစ်ခုတော့ ကျန်သေးတယ် ဦး၊ ဒါပေမဲ့ အဲဒီအခန်းက အိမ်သာပျက်နေလို့ ပြင်နေတာ မပြီးသေးဘူး၊ အများသုံးအိမ်သာမှာ အသုံးပြုပြီးနေနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဦး နေလို့ရပါတယ်” ဘယ်မှလည်းထပ်မရှာချင်တော့တာနဲ့ အဲဒီအခန်းကိုဘဲ ယူလိုက်တယ်။မန္တလေးသင်္ကြန်မှာ ပျော်ပါတယ်။အခန်းပြန်ရောက်လို့ အပေါ့အလေးသွားတဲ့အခါ နည်းနည်းကသီတာကလွဲလို့ ကျန်တာအားလုံးအိုကေပါတယ်… အဲ…မအိုကေတာက ပြန်မယ့်နေကျမှဖြစ်တာ၊ပြန်မယ်ဆိုပြီး ပစ္စည်းတွေထုတ်ပိုးသိမ်းဆည်းပြီးကာမှ ဗိုက်ကရစ်ရစ်ပြီးနာလာတယ်..ဒါနဲ့ အိမ်သာရှိရာ ကမန်းကတန်းပြေးရတာပေ့ါ၊ ကံများမကောင်းချင်တော့ အိမ်သာက တခန်းမှ မအားဘူး။ဟိုတယ်က ၂ထပ်ဆိုတော့ အောက်ထပ်မှာလဲ အများသုံးအိမ်သာရှိတာနဲ့ အောက်ထပ်ဆင်းပြေးရပြန်တယ်.. အာ..အောက်ထပ်က အိမ်သာတွေမှာလဲ လူအပြည့်..ခက်ပြီ၊ ဒီမှာလဲထွက်ကျတော့မယ်…ကြံရာမရတဲ့အဆုံး အခန်းကိုဘဲပြန်လာလိုက်တယ်… အခန်းထဲက စာပွဲပေါ်မှာအလှတင်ထားတဲ့ ပန်းအိုးကိုယူလိုက်တယ်၊ပန်းတွေကို ဆွဲထုတ်လိုက်ပြီး ပန်းအိုးထဲကို ဗိုက်နာတဲ့ကိစ္စရှင်းချလိုက်တယ်။ပြီးတော့ ပန်းတွေ ပြန်စိုက်ထဲ့လိုက်တယ်။ခုမှနေသာထိုင်သာရှိတော့တာကိုး… ပြီးတာနဲ့ […]
ကောင်လေးတွေကို လိုသလိုကျီစားတဲ့ ရာသီခွင်
မိန်းကလေးတွေရဲ့ အားသာချက်ကတော့ ကောင်လေးတွေကို ကျီစားတတ်တဲ့၊ ချစ်စရာကောင်းသော အနိုင်ကျင့်ခြင်းပါပဲ။ ရာသီခွင်အလိုက် ဘယ်သူက ကောင်လေးတွေကို ဒုက္ခရောက်စေလဲဆိုတာကို ကြည့်ရအောင်။ ၀၁. ကန်ရာသီ (Virgo) : သြဂုတ် ၂၂ ရက်မှ စက်တင်ဘာလ ၂၂ ရက်အတွင်းသူကတော့ ဘာကိုပဲလုပ်လုပ် ခေါင်းထဲမှာ အားလုံးကို အစီအစဉ်တကျ စဉ်းစား ဆုံးဖြတ်ပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အချစ်ရေးမှာလည်း စဉ်းစားပြီးသားဖြစ်လိမ့်မယ်။ သူ့ရည်စားနဲ့တွေ့ပြီး ၁၀ ကြိမ်လောက်မှ လက်လေးကို ထိခံမယ် စသည်ဖြင့်။ တကြိမ်စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပြီးသား ကိစ္စကို ဘယ်တော့မှ မပြောင်းလဲချင်ပါ။ ၀၂. ပြိဿရာသီ (Taurus) : ဧပြီ ၂၁ ရက်မှ မေ ၂၀ ရက်အတွင်းသူကတော့ လယ်ကွင်းထဲမှာရှိတဲ့ နွားလေးလိုပါပဲ။ အချိန်တိုင်းလိုလို အေးအေးဆေးဆေးပါ။ နောက်ပြီး ယောင်္ကျားလေးတွေကို […]
အချိန်က မနက် ၈ နာရီခွဲလောက်…. နည်းနည်းအလုပ်ရှုပ်နေတဲ့ မနက်ခင်းတစ်ခုမှာပေါ့ဗျာ.. အသက်ရှစ်ဆယ်လောက်ရှိတဲ့ လူကြီးလူကောင်းတစ်ယောက်ဟာ သူ့လက်က ဒဏ်ရာကို ချုပ်ရိုးဖြေဖို့ရောက်လာပါတယ်… ရောက်ရောက်ချင်းပဲ သူ ၉ နာရီမှာ ချိန်းထားတာလေးရှိလို့ မြန်မြန်သွားချင်တဲ့အကြောင်းပြောပါတယ်… သူ့ကို သဘောပေါက်ကြောင်းမျက်ရိပ်ပြပြီး ထိုင်ခုံမှာထိုင်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်… တစ်ယောက်ယောက်လာမကြည့်ပေးနိုင်သေးသ၍ သူတစ်နာရီတော့စောင့်ရဦးမယ်လို့ ကျွန်တော်တွက်လိုက်ပါတယ်… သူ့နာရီကိုကြည်လိုက် ဒဏ်ရာကိုကြည့်လိုက်နဲ့ သောကများနေတဲ့ပုံကို ကျွန်တော်သတိထားမိလိုက်တယ်… တခြားလူနာတစ်ယောက်မှလည်း ကြည့်စရာမရှိတဲ့အတွက် သူ့အနာကို ကြည့်ပေးဖို့ ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်…. အနာကိုကြည့်လိုက်တော့ ကောင်းကောင်းကျက်နေပါပြီ… ဒါနဲ့ သူ့ချုပ်ရိုးဖြေပြီး ပတ်တီးပြန်စီးပေးဖို့ လိုတဲ့ပစ္စည်းတွေ အကူတစ်ယောက်ကိုယူခိုင်းလိုက်တယ်… သူ့အနာကို ကျွန်တော်ကုသပေးနေတုန်း သူနဲ့စကားစပြောဖြစ်ပါတယ်.. ဒီလောက်အလျင်လိုနေတာ တခြားဆရာဝန်တစ်ယောက်ယောက်နဲ့များ ချိန်းထားလားလို့ သူ့ကိုကျွန်တော်မေးကြည့်တယ်… ဦးလေးကြီးက မဟုတ်ပါဘူးလို့ဆိုပြီး သူ့ဇနီးနဲ့တူတူ မနက်စာစားဖို့ ဘိုးဘွားရိပ်သာကိုသွားရမှာလို့ ပြောပြပါတယ်… သူမရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ကျွန်တော်မေးကြည့်တယ်… […]
ယခုရာသီမှာ ပေါပေါများများတွေ့ရတဲ့ အသီးတွေထဲမှာ ကြက်မောက်သီးလည်း အပါအဝင် ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်စားသုံးတဲ့အရာဟာ ကိုယ်အတွက် ဘယ်လို အာနိသင်ကောင်းတွေ ပေးတယ်ဆိုတာကို လူတိုင်း သိထားသင့်ပါတယ်။ ဒါမှသာ အစားအစာကို ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်အောင် စားသုံးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သွေးတိုးရောဂါ ဝေဒနာသည်များ အနေနဲ့ တစ်နေ ကို ကြက်မောက်သီး ၈-လုံးကနေ ၁ဝ-လုံးခန့် စားပေးသင့်ပါတယ်။ အစေ့ထဲတွင် hypoglycemic ဓာတ်ပါရှိခြင်းကြောင့် လည်း သွေးထဲရှိသကြားပမာဏကိုကျဆင်းစေပါတယ်။ ကြက်မောက်သီး တစ်ခွက်စာ ပမာဏကို စားသုံးသောအခါ၊ တစ်နေ့တာ လိုအပ်သည့် ဖော့စ်ဖရပ်စ် ၄.၃% ကို ရရှိစေသည့် အတွက်၊ ကျောက်ကပ်ကို ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်နိုင်အောင် ထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။ ကျောက်ကပ်ကိုလည်းသန့် စင်စေပါတယ်။ ကယ်လ်စီယမ်ဓာတ် ပါရှိခြင်းကြောင့် သွားနှင့်အရိုးများကိုခိုင်ခန့် စေပါတယ်။ ကြက်မောက်သီးကို စားပေးခြင်းဖြင့် […]
ရှောက်သီးကို အလှအပနှင့် သဘာဝ အိမ်သုံးပစ္စည်းများအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်တာကို သင်သိပါသလား။ ရှောက်သီး ဟာ သင့်အတွက် အသုံးဝင်စေတယ် ဆိုတာကို သိစေနိုင်မယ့် အချက်တချို့ကို ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ (၁) ဆံသားတောက်ပြောင်စေခြင်း ခေါင်းလျှော်ပြီးတဲ့အခါ ဆံသားအနှံ့ကို ရှောက်ရည်တစ်ဆနဲ့ ရေတစ်ဆရောထားတဲ့ အရည်ကို လိမ်းပါ။ မိနစ် အနည်းငယ် ထားပြီးနောက် ရေနဲ့ သန့်စင်ပေးပါက ဆံသားတွေ တောက်ပြောင်လှပစေပါတယ်။ (၂) မျက်နှာလိမ်း တိုနာအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ခြင်း ရှောက်ရည်က ချွေးပေါက်တွေကို ကျုံ့စေတဲ့ အာနိသင်ရှိပါတယ်။ ရှောက်ရည် အနည်းငယ်ကို ဂွမ်းစအနည်းငယ်နဲ့ တို့ယူပြီး တိုနာအဖြစ် သင့်မျက်နှာပေါ်မှာ လိမ်းပေးပါက မျက်နှာအဆီပြန်တာကို သက်သာစေပါတယ်။ (၃) လက်သည်းဖြူစေခြင်း လက်သည်းအရောင်က ဝါကြန့်ကြန့်ဖြစ်လို့ အရောင်မလှ ဖြစ်နေရင် ရှောက်ရည်ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ရှောက်သီးကို […]
အမျိုးသမီးတစ်ယောက်မှာ အကြိုက်ဆုံး ဘီယာ ရှိနေခြင်းဟာ ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းမွန်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ပတ် ကို ၂ ပိုင့်သာ သောက်သုံးပေးဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်။ တန်ဆေးလွန်ဘေး ဆိုသလိုပါပဲ။ အပတ်စဉ် ဘီယာ ၁ ပိုင့် (သို့) ၂ ပိုင့်ခန့် သောက်သုံးတဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာ နှလုံးရောဂါ ဖြစ်ပွားခြင်းကို ခံစားရဖို့ အခွင့်အလမ်းနည်းစေတယ်လို့ Gothenburg တက္ကသိုလ်က သုတေသီတွေက ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီလို အပတ်စဉ် ဘီယာ ၁ ပိုင့် (သို့) ၂ ပိုင့် ခန့် သောက်သုံးသူတွေဟာ ဘီယာ အလွန်အကျွံသောက်သုံးသူတွေ ၊ ဘီယာ လုံးဝ မသောက်သူတွေနဲ့ ယှဉ်ရင် နှလုံးရောဂါ ဖြစ်နိုင်ချေ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းနည်းပါးနေပါတယ်။ သုတေသီတွေဟာ အသက် ၅၀ ၀န်းကျင်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ […]
အမျိုးသမီးများ အိမ်ထောင်မပြုခင် ဒါလေးတွေတော့သိထားပါ…
ဒီလောက်ပြောနေတဲ့ကြားက အမျိုးသမီးများအနေနဲ့ အိမ်ထောင်ပြုမယ်များ ကြံရင်အောက်ပါ အမှန်တရားများကို လက်ကိုင်ထားကြစေချင်ပါတယ်… (၁) အိမ်ထောင်ပြုလိုက်လို့ တစ်ကိုယ်ရေ နေရတဲ့ဘဝထက် ထူးပြီးစိတ်ချမ်းသာလာရမှာ မဟုတ်ဘူး။ သည်အချက်ဟာ နိဒါန်းမှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းဆောင်းပါးပါ သိပ္ပံနည်းကျ သုတေသနအရ ထင်ရှားနေပါတယ်။ (၂) ယောကျာ်းတွေဟာ မရခင် ဖျာလိုလိပ်၊ ထိပ်ပေါ်တင်တတ်၊ ရပြီးရင်ဖျာလိုခင်းပြီး တက်နင်းတတ်တယ်။ သည်အချက်ကို မယုံရင် ကိုယ့်အမေ၊ကိုယ့်အဒေါ်အပါအဝင် အိမ်ထောင်သက် ကြာရှည်နေတဲ့ အိမ်ထောင်ရှင်များဆီကသက်သေခံထွက်ချက်တွေ တောင်းကြည့်နိုင်ကြပါတယ်။ (၃) ယောကျာ်းတွေရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးသစ္စာကို ဘယ်၊ ဘယ်သောအခါမှမယုံစားထိုက်ဘူး။ ခန္ဓာဗေဒသဘော၊ စိတ်ပညာအရ လူသတ္တဝါတွေမှာ ဖြစ်ပေါ်မြဲတပ်မက်စိတ်နဲ့ ရမ္မက်ဇော သဘောတွေမှာ ကျားနဲ့ မတို့ဟာ ဖြောင့်ဖြောင့်ကြီးဆန့်ကျင် ခြားနားလှတာမို့ အမျိုးသမီးများအနေနဲ့ ဘယ်လိုမှ နားလည်လို့မရနိုင်လောက်တဲ့ ပွေလီမှုအစုံဟာ ကျွန်တော်တို့ ယောက်ျားတွေကိုထုံမွှမ်းထားပါတယ်။ ခြွင်းချက်အနေနဲ့ ရဟန်းတော်များ၊ […]
လက်ကိုင်ဖုန်းကျေးဇူးကြောင့် ချစ်သူဘဝကို ရောက်သွားပေမယ့် အမှားအယွင်းတစ်ခုခုကြောင့် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခုဖော်ပြထားတဲ့ အချက်တွေကနေ သင်ယူပြီးတော့ သင့်လက်ကိုင်ဖုန်းကို တရားခံမဖြစ်သွားအောင် ကြိုတင်သတိထားနိုင်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ Like ကို သေချာဆန်းစစ်ပါ။ ကိုယ်တင်ထားတဲ့ပုံ၊ စာတိုဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ သူက Like လုပ်ပေးတိုင်း သူက အကုန်လုံးကို သဘောကျနေတယ်လို့ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်လို့မရပါဘူး။ ဒီလိုပြောလိုက်လို့ နည်းနည်းတော့ အောက်သွားလိမ့်မယ်။ သူပျော်နေလို့လည်း ဖြစ်မှာပေါ့။ ဒါပေမယ့် သင့်ရဲ့တချို့ပုံတွေ သူတကယ်သဘောကျနေတာတွေလည်း ရှိပါတယ်ဆိုတာ သတိရစေချင်ပါတယ်။ ခံစားချက်ကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ သင်္ကေတလေးတွေကို အရမ်းအသုံးပြုခြင်း။ မိန်းကလေးတွေကတော့ သုံးရတာနှစ်သက်ပေမယ့် ယောင်္ကျားလေးတွေကတော့ သိပ်သဘောမကျတတ်ကြပါဘူး။ သင် လိုတာထက်ပိုသုံးတယ်ဆိုရင်တော့ တစ်ဖက်လူက ဒါမရင့်ကျက်တဲ့အပြုအမူ ဒါမှမဟုတ် သင်ချစ်စရာကောင်းအောင် တော်တော်ကြိုးစားနေတဲ့ပုံပဲ ဆိုပြီးတော့ ယူဆသွားနိုင်ပါတယ်။ တခါတလေတော့သုံးပါ…. အလွန်အကျွံမသုံးမိပါစေနဲ့ပေါ့။ မသေချာမစစ်ပဲ […]
မျက်နှာပေါင်းတင်ဆေး ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်သည် အတုများဖြစ်
နာမည်ကြီး အမှတ်တံ ဆိပ် မျက်နှာပေါင်းတင်ဆေးများ မှအပ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်မှာ အတုများဖြစ်ပြီး သုံးစွဲပါက အန္တရာယ်ရှိကြောင်း အစားအ သောက်နှင့် ဆေးဝါးကြီးကြပ်မှုဦး စီးဌာန(FDA)နှင့် ဆက်စပ်အဖွဲ့ အစည်းများထံမှ သတင်းရရှိ သည်။ ဈေးကွက်အတွင်း ပျံ့နှံ့နေ သော မျက်နှာပေါင်းတင်ဆေး များတွင် အချို့နာမည်ကြီးတံဆိပ် များမှအပ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော် သည် အိမ်နီးချင်း တရုတ်၊ ထိုင်း နိုင်ငံနယ်စပ်တို့မှတစ်ဆင့် တင် သွင်းလာသော အလှကုန်အတု များဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ အလှ ကုန်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်မင်းက ပြော သည်။ ပေါင်းတင်ဆေး အတုများ သည် တံဆိပ်မျိုးစုံ၊ ပုံစံမျိုးစုံဖြင့် နယ်စပ်မှဝင်ရောက်လာပြီး မူရင်း ဈေးနှုန်းမှာ မြန်မာငွေကျပ် ၂၀၀ ခန့်သာရှိသော်လည်း ပြည်တွင်း […]
၀က်ခေါက်ကင် ထမင်းပေါင်းလေးပါ။ ထမင်းပေါင်း နဲ့ ၀က်ခေါက်ကင်နဲ့ တွဲဖက် စားသုံးရတာမို့ အရသာကလည်း တမူထူးခြားပြီ အရမ်းစားလို့ ကောင်းပါတယ်။ ထမင်းပေါင်းမှာ ချဉ်၊ချို၊ ခါး အရသာ ၃မျိုးလုံးရအောင် အမျိုးအမယ် များများ ထည့်ချက်ရပါတယ်။ ခုပဲ ချက်နည်းလေးကို ကြည့်လိုက်ရအောင်… ထမင်းပေါင်းတွင် ပါဝင်သောပစ္စည်းများ ချက်ပြီးသားထမင်း – ဆန်၁လုံးမုန်လာဥနီ – ၅ကျပ်သား (အပါး စောင်းလှီးပါ)ပန်းကော်ဖီ – တစိတ် (အတုံးသေးများ တုံးပါ) ဘိုစားပဲ – ၅ကျပ်သား (အပါး စောင်းလှီးပါ)မှို- ၅ကျပ်သား (အပါး စောင်းလှီးပါ)ငုံးဥ – ၈လုံး ( ပြုတ်ပြီ အခွံနွှာထားပေးပါ)ခရမ်းချဉ်သီး – ၂လုံး (အစေ့ထုတ် ၈စိပ်စိပ်ပါ)ကြက်သွန်ဖြူ – ၂မွှာ (ထောင်းပါ)ကြက်သွန်နီ […]